Maitiro ekuisa Popcorn TIme paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Unoda here gadza Popcorn Nguva? Chirongwa ichi chinowanikwa kune akawanda mapuratifomu, kusanganisira Linux, uye mune ino posvo isu ticha tsanangura maitiro ekuiisa pane yako distro nhanho nhanho nenzira yakapusa. Kune avo vasingazive chirongwa ichi cheArgentina, iri yakavhurwa sosi midhiya mutambi app. Yaifungidzirwa seimwe nzira yevhidhiyo yekufambisa masevhisi (kutenderera kwevhidhiyo) senge yakakurumbira Netflix iyo iri mufashoni ... asi ichishandisa torrent protocol. Inoshanda nenzira yakafanana neSpotify maererano nekodzero, asi nevhidhiyo.
Kurumidza Popcorn Nguva yakave yakakurumbira uye zvisingatarisirwi, mu yakamiswa kuvandudzwa kwayo muna2014 uye vekutanga vadziri havana kuramba vachikudziridza, asi chirongwa ichi chakaramba chichigadzirwa kuburikidza neforogo. Popcorn CE kana Yemunharaunda Edition ndiko kuberekwazve kweiyo isipo app uye inoramba ichivandudzwa nhasi nekuda kwenzvimbo dzemunharaunda dzinotarisira kuchengetedzwa kwayo.
Dzidziso yekuisa Popcorn Nguva
Kuisa Popcorn Nguva CE zvinogona kuitwa nekutevera matanho ari pazasi:
Dhawunirodha pasuru kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Iye zvino zvatove Tichava nazvo mudhaunirodha dhairekitori (kana chero kupi), iri tarball. Tinofanira kutanga taenda kudhairekitori iri kubva kunyowani:
Isu tinoburitsa tarball, chinja X, Y, Z, VV nekodhi yenhamba inoenderana neshanduro yawakadhinda:
Isu tinoisa PopCorn-Nguva CE, kutanga tinopinda dhairekitori rakagadzirwa mushure mekudzvanywa:
Kuiswa kunotanga uye zvinogona kutibvunza kana tichigamuchira rezinesi, iro rakakwana kunyora «ndinobvuma» pasina makotesheni uye woenderera ...
Iye zvino iwe unogona ikozvino kutsvaga iyo app mune inotangisa kana pakati pezvirongwa zve distro yako, kana kuzvitanga zvakananga kubva kunyaradzo nekutaipa:
Kana iwe uine chero mibvunzo kana matambudziko kuisa Popcorn Nguva pakombuta yako yeLinux, tisiyei mhinduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Isa Popcorn Nguva
Inotaridzika zvakanyanya kunaka. Ndinofanira kutarisa izvi.
Asi mafirimu achiri muchirungu here?
Iwe unayo iyo 32-bit vhezheni?
Anthony Gutierrez akadaro
Si http://www92.zippyshare.com/v/PkEB1dm7/file.htmlPa peji yepamutemo iwe unowana zvese zvinotorwa, zvinova izvo zvaifanira kunge zvakapihwa pano. http://popcorntime.ag/
Pindura kuna Antonio Gutierrez
Ndiyo webhusaiti yepamutemo zippyshare?
Mune ino mega link pane vaviri vanoona. https://goo.gl/Nyu6vQ , Ndakangoisa mu32 uye inoshanda .. kwaziso vamwe.
Kutonhora! Ichi chishandiso chakabatana neKare uye chakagadzirirwa chaizvo "hardcore" neimwe prog. Kumba kugadzirisa zvinyorwa, plugns, repos uye kugadzirisa P0pcrn ...
Uye isu takatokanda imba kunze kwehwindo, isu takashandisa iyo info kuumbiridza yako wega Linux distro uye iwe une Dist. Ive yako yemultimedia centre - Pc «de Salón»
Pinky x akadaro
Popcorn yakavhurwazve uye iripo https://popcorntime.sh.
Kune ese mavhezheni ekurodha pasi kune chero distro uye dzese tsananguro uye hongu izvozvi muchiRungu. Chandakanga ndisingazive ndechekuti chirongwa ichi pakutanga chaive chiArgentina ... zvakanaka
Iwo mafirimu uye mamwe akabatanidzwa kune imdb kudzidza zvakawanda nezvazvo, saka zvakatonyanya muChirungu.
Tichaona mabatiro atingaite mumwe nemumwe kubatana kuitira kuti pave nezvinhu muSpanish
Ehezve, kubva pane zvandakaona, zvese zvine zvinyorwa zvidiki ...
Pindura kuna Pinky X
Johane Danieri akadaro
+10 lynx, inoshanda zvakakwana, ichangobva kuiswa paLinux Mint 64-bit
Pindura Juan Daniel
Ini handina kukwanisa kuiisa, zvinondipa kukanganisa mu ./install
Ini ndinogara ndichiwana kukanganisa mune iwo murairo kana ini ndichiedza kuisa .tar mafaera
Ini ndinowana kukanganisa ne ./install rairo, chokwadi ndechekuti pese pandinoedza kuisa maapplication nenzira iyi izvi zvinoitika kwandiri. Mumwe munhu ndibatsire ndapota uu
Kwaziso, ndingaiisa sei kana ndichiiburitsa isiri kuoneka kuisa faira ???
Tarisa mune yangu nyaya yakashanda iri panzvimbo pekuiisa uye nekumhanya nayo zvakananga. Saka pachinzvimbo chekuisa yekuisa raira nyora "./Popcorn-Time" uye nenzira iyoyo chirongwa chinotanga. Ini ndiri mutsva kuUbuntu saka ndingadai ndisingazive nzira yekuisa kapfupi kana chimwe chakadai, kwenguva iyo yandinogara ndichiivhura nenzira iyi.
Javier Sanchez akadaro
Mhoro Carlos, kuti ushandise iyo Popcorn-imeTime Launcher, iwe unofanirwa kutsvaga iyo yekutanga, tinya-kurudyi uye gadziridza iyo launcher, rairo $ / usr / bin / popcorn-nguva yashandurwa kuita inotevera rairo $ ./Popcorn- Nguva
Pindura Javier Sánchez
JESU LUIS akadaro
Pindura kuna JESU LUIS
Iyo ./install haishande nekuti IZVI HAIPO mukati mefaira. Mune vhezheni yazvino zviri nyore kuti iwe umhanye zvakananga ./Popcorn-Time
Pindura kuti engelarg
Kutenda nemurairo ./Popcorn-Time yaive !!! waita hako
Pindura kuna Samuelinux
Chimwe chikumbiro chakanaka chinoshanda zvakafanana uye zvakare chinokutendera iwe kutarisa akateedzana ndeye Stremio (Uchishandisa Juan Carlos uye RARBG addons) (Iyo inoshandawo nehova)
Mhoroi, ini ndinowana iyi kukanganisa nw_content_renderer_hooks.cc (48)] Yakundikana kurodha node library
./Popcorn-Time: kukanganisa paunenge uchirodha raibhurari dzakagovaniswa: libnw.so: haigone kuvhura yakagovaniswa faira refaira: Hakuna faira rakadai kana dhairekitori.
Ini handinzwisise chero chinhu nezveLinux, ini handigone kuisa iyi bullshit
Mhoroi, ndakadhirodha uye ndikaisunungura, handinyatso kuziva kuti danho iri rinorevei:
«» Tsiva X, Y, Z, VV nekodhi yenhamba inoenderana neshanduro yawakadhinda.
tar Jxvf Popcorn-Nguva-xyz-linux-vv.tar.xz «» »»
Ini ndiri mushandisi akapusa, ini handizive kwandinofanira kutsiva kana chii chinoda kutsiviwa, kana kwandingawane kodhi yenhamba yandinoda ...
Ndatenda zvakadaro nekuisa iyo info, uye ndinofungidzira kuti kana ndikakwanisa kupfuudza nhanho iyi, ini handizive kwandichatangira kuiswa ...
Tsvaga iyo faira rawakadhinda. Hover pamusoro payo. Dzvanya-kurudyi pane zvivakwa. Kopa zita refaira.
Zvino nyora mune inouraya tar Jxvf wobva wanama zita refaira
Ini ndakatoiisa, haina kushanda ... ikozvino handisi kuwana nzira yekuibvisa, chero rubatsiro?
Kernel 4.13 yave kuwanikwa kune wese munhu !!